Ngaba kufuneka uwusebenzise umxholo wezikrini ezibanzi? | Martech Zone
Ngaba kufuneka uwusebenzise umxholo wezikrini ezibanzi?
NgoLwesithathu, nge-30 kaJanuwari 2013 NgeCawa, ngoMatshi 24, 2013 Douglas Karr
Ndingathanda ingcali yamava omsebenzisi ukuba angenele kule post. Bendijongile njengoko iisayithi zobuchwephesha ngakumbi nangakumbi zonyusa indawo ekujongwa kuyo (indawo ebonakalayo yesixhobo sakho) kwaye andichukunyiswa nyhani. Andiyikholelwa loo nto, ukuba unesisombululo esongezelelekileyo ekufuneka usisebenzisile.
Nalu ulwahlulo lwezisombululo eziphezulu kwi Martech Zone:
Esona sisombululo sithandwa kakhulu, njengoko ubona, yi-1366 × 768. Oku kuhle kakhulu kwisisombululo esisezantsi selaptop kwintengiso ngoku. Ngokulinganayo, nantsi indlela ebonakala ngayo isikrini:
Njengoko ubona ikhusi libanzi kakhulu, libanzi kakhulu kwaye lifutshane. Ngelixa lenza iscreen esikhulu esenzelwe ukujonga iividiyo ze-HD, ayisosikrini esenzelwe iiwebhusayithi kunye nokufunda. Kwaye sijonga iividiyo mgama… hayi kufutshane nalapho sifunda isicatshulwa kunye nokuchwetheza kwibhodi yezitshixo. Isikrini esimi nkqo sinokuba sisisombululo esingcono kakhulu, kuba iiwebhusayithi ziyahluka kubude kunokuba zisenza kububanzi.
Ke, ndiyabona oku kuhlaselwa kwewebhusayithi eziyilelwe ukukhulisa indawo ekujongwa kuyo kwaye andithengiswanga. Amaphephandaba afumanisa kudala ukuba abantu bafunda kwimicu ethe nkqo, hayi ende ethe tyaba. Ujoliso lwethu luthanda ukulahleka njengoko sihamba ngaphaya kwescreen. Ukuhambisa izinto kude ngasekhohlo, okanye ngasekunene kuzibeka ekugxileni njengoko ndifunda umxholo, ke izinto eziziisekondari ezinje ngeebar ezisecaleni ziphantse zahoywa kwaphela.
Ngaloo nto, andijongi ukuyila kwakhona Martech Zone isikrini sokuthatha iarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba ngalo lonke ixesha. Uyilo lwethu ekubekweni kweliso kwahlukile kumava akwisixhobo esiphathwayo okanye ithebhulethi kwaye siza kuqhubeka nokugcina la mava engaqhelekanga. Ububanzi bethu kwibhlog bulungile ekufundeni phezulu ukuya ezantsi kwaye ubone ibha esecaleni njengoko sijonga umxholo ophambili. Umxholo wethu ophambili ungama-640px ububanzi ukukhulisa ubungakanani bevidiyo esemgangathweni kunye nebar esecaleni engama-300px ububanzi kwintengiso esemgangathweni.
Ucinga ntoni? Ngaba kufuneka sihambe ngendlela yezinye iisayithi? Okanye ngaba ndikumkhondo olungileyo kunye nolwakhiwo lwethu lwangoku?
tags: 1024x7681366x768uyilohd esweniesweni enkuluIlisojonga izigqiboesweni ubukhuluzigqiboTechindawo yokujongaesweni ngokubanzi
Yeka Ukuthetha Umamele
Kutheni iZicelo eziSelfowni zahlukile
Jan 31, 2013 ngo-7: 39 PM
Andikwazi ukuthi ndiyincutshe yamava omsebenzisi, nangona kunjalo kudala iisayithi, kwaye ndityhala wonke umntu nzima kuyilo oluphendulayo, ukuba nje unakekele iingxaki onazo Ukujongana.
Ukuba ujonga iisayithi ezinje ngeMashable, iVerge, kunye ne-NPR, ungatsho ukuba batshintshele kuyilo olubanzi kakhulu njengoko utshilo endikuthandayo, njengoko ndisebenza kwaye ndifunda okuninzi okunxulumene nomsebenzi isikrini esingama-32.
Nangona kunjalo, ngokoluvo lwam xa kufikwa kwiziza ezinjengezakho, kuya kufuneka ndizibuze ukuba yintoni ekubingelelwe ngayo kwaye luhlobo luni lohlahlo-lwabiwo mali oya kuthi uluguqule.
Umphuhlisi kum unokucebisa ukuvavanywa ngoyilo olubanzi kumxholo othile, kwaye asebenzise ukuhambisa kwakhona kwiindawo ezithile zokujonga, emva koko uye apho.
Ndifumanisa ukuba ngeesayithi ezinje ngeVerge kunye neMashable, isiqwenga esikhulu ngokwenyani sidinga inani elifanelekileyo legumbi, kwaye uyilo olubanzi luyanceda ngokwenene oko.
Jan 31, 2013 ngo-9: 46 PM
Enkosi kolu luvo lukhulu, Doug! Ngokuqinisekileyo sinokutyala imali ukuba kukho ubungqina bokuba ububanzi, iifomathi eziphendulayo ziphucula ukufundeka kunye nokuzibandakanya kwiindawo. Ngaba bukhona ubungqina obucacileyo boku phaya?